R/wasaaraha Bangaladesh oo sheegtay in ay naftooda u hurayaan Muslimiinta Rohingya | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA R/wasaaraha Bangaladesh oo sheegtay in ay naftooda u hurayaan Muslimiinta Rohingya
R/wasaaraha Bangaladesh oo sheegtay in ay naftooda u hurayaan Muslimiinta Rohingya
Daka-(SONNA)- R/wasaaraha dalka Bangaladesh Sheekh Xasina ayaa sheegtay in shacabka dalkeeda ay diyaar u yihiin inay yareeyaan waxa ay maalintii cunayaan si ay u saacidaan boqolaalka kun ee muslimiinta Rohingya, kuwaasi oo ka soo barakacay degaanadooda dalka Maymar.
Hadalka R/wasaaraha ayaa yimid ka gadaal markii Todobaadyadii tagay dalkeeda u soo barakaceen in ka badan Nus milyan qof oo muslimiinta Rohigya ah,kuwaasoo ka soo cararay gumaadka ciidamada amniga ee Maymar.
Sheekh Xasina oo ka soo laabtay Shirkii Qaraamada midoobay ee magaalada New yourk ka dhacay ayaa ku tlmaantay Isir Sifeyn waxa ka dhacaya dalka Maymar oo lagula kacayo muslimiinta laga tirada badan yahay Rohigya,waxayna eedayn u jeedisay Xukuumadda dalkaasi shaqaaqada ka dhacaysa xuduudda uu dalkeeda la wadaago Maymar.
Tan iyo markii dalka Maymar ay ka bilawdeen gumaadka Muslimiinta laga tirade badan yahay ee Rohingya waxaa dalka Bangaladesh u soo barakacay in ka badan 500 kun muslimiinta Rohingya,waxayna Dowladda Bangaladesh dadkasi xerooyin uga dhistay Jaziirad dalkeeda ka tirsan iyadoo hay’adaha gargaarka gurmad deg deg ah u fidiyeen muslimiintaasi.
Previous articleGuddiga amniga ee golaha shacabka oo la kulmay wasiirka amniga gudaha
Next articleQaar kamid ah guddiyada Golaha Shacabka oo kulmay